1I-Russian XBIT, ongowenkampani N. V. Inkampani1X Corp. futhi unamalayisense eCuraçao. Ngabe umgomo wakho? Nqoba umhlaba wemidlalo ye-inthanethi. Kanjani? Ngemakethe enkulu kakhulu yezinhlu futhi namaphuzu ebhonasi angcono kakhulu kunathi (futhi bona) angikaze ngimbone. Futhi sikhuluma ngebhonasi eyamukelekile […]
inethiwekhi enkulu ye-paris Unibet Casino Unibet umphakathi ohlukanisiwe. Futhi ilayisensi esekwe eMalta (I-SMG), Inkampani ye-Holy ineminye yemidlalo engcono kakhulu yekhasino ye-inthanethi, ngoba isebenzisa ezintathu zesoftware ehamba phambili njengeNet Entertainment, I-Microgaming o Yggdrasil. Kepha umthwalo we-NetEnt ungaphezu kwamathathu […]
Lapho uBwin, noma ngaphansi kwegama elidala elithi Betandwin, uzalelwe eVienna ku- 1998, Cishe noma ngubani angabikezela indlela yempumelelo. Okungaphezulu 22 izigidi zamakhasimende zitshalile kwezemidlalo yazo, osephenduke waba ngomunye wabadlali abaphambili emhlabeni wonke kumdlalo wamazwe omhlaba. Yize udumo lolo […]
Ngemuva kwe-888sport ne-logo, iqembu elidume umhlaba wonke 888 Holdings PLC. Kusuka 2008, inkampani inikeza i-poker ne-casino kanye nokubheja kwezemidlalo. brand isheshe yathola idumela njengesihlonipho sasekhaya nesihloniphayo. Ekuhlaziyeni kwethu, sizomlandela ngokuseduze opharetha ezindabeni ezibalulekile zokuphathwa […]
Uma amagama amakhulu embonini yezemidlalo yaphesheya kwezilwandle eParis, ayikwazi ukukhipha nabahlinzeki bezingxoxo abaku-inthanethi iBetfair.Lokhu iNgilandi, I-Paris Stock Exchange evunywa uhlelo. Ngezansi, ake sibhekisise ezemidlalo kuzo zonke izigaba ezifanele. Yinto ebaluleke kakhulu kithi? Uthembeka kangakanani iParis? Ingabe ikhona ibhonasi? […]
Yize unesipiliyoni esicebile, uhlobo olutholakala eSpain ngenyanga edlule. Ezweni lethu, kuvunyelwe nguMqondisi Jikelele Wezokugembula (UNKULUNKULU) ukuphela kwemininingwane, ngakho-ke singakwethemba ukuphepha kwepulatifomu. Imodi ye-Sport evunyelwe ngabaseSpain futhi ejabulisa kakhulu eParis ingaguqula i- […]
Ukudlala indima ekhululeke kakhudlwana ekhaya yinto eyaziwa yiwo wonke umuntu, kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi umkhathi ekhasino uyanyamalala. Kepha kungani kufanele silinde impelasonto ukuze siye ekhasino bese siwuthokozela umdlalo? Yilokhu inkampani yesekisi, ongumnikazi […]
I-Interwetten ingesinye sabahlinzeki bezemidlalo ababheja abahamba phambili eYurophu. Inkampani yase-Austrian yasungulwa phakathi 1990 por Wolfgang Fabian; ngaleso sikhathi njengomfundi wezomnotho, osomabhizinisi abasebasha abazimisele ukungena embonini yezokudlala. In 1996, Ngiye ku-inthanethi futhi ngaqala eyokuqala eParis. […]
Njengoba sithuthukisa ubuchwepheshe obusha, ukuzivumelanisa nezimo uLuckia angaya kwiwebhusayithi yakhe ukufezekisa lokho ayikho namuhla. Kubalulekile ukuthi izinkampani zijwayeze abasebenzisi ngazo zonke izinhlobo zezinguquko ukwenza isipiliyoni sabo semidlalo siphelele ngangokunokwenzeka.. Futhi, umdlalo egumbini lokudlala, igumbi […]
Uma uya kwiwebhusayithi yabo, kungekudala uzobona ukuthi kunomthunzi omningi kanye notshwala obuningi, izici ezimbili eziyisisekelo kunoma yimuphi umdlali ofuna ukujabulela isikhathi somdlalo. Inhloso yalesi siza ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono kakhulu zabadlali futhi zikhululekile kuzo 5 iminyaka yesipiliyoni kulo mkhakha […]